Xisbiga KULMIYE Oo Hal Mar Ku Soo Bandhigay 21-Ka Murashax Ee Ceerigaabo | FooreNews
Home wararka Xisbiga KULMIYE Oo Hal Mar Ku Soo Bandhigay 21-Ka Murashax Ee Ceerigaabo
Ceerigaabo (Foore)- Xaflad ballaadhan oo lagu soo bandhigayey musharaxiinta xisbiga Kulmiye uga qayb gelaya tartanka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmada Ceerigaabo ayaa maanta lagu qabtay beerta Nuura ee magaaladaasi ceerigaabo.
waxaa xafladaasi goob-joog ka ahaa wefti ka tirsan xukuumadda Somalialnd oo gobolkaasi socdaal hawleed ku joogay maalmahii la soo dhaafay oo uu horkacayo Wasiirka Gaashaandhiga Somaliland Md. Axmed xaaji Cali Cadami ayaa waxa lagu soo bandhigay guud ahaan musharaxiintii xisbiga Kulmiye ee magaalada Ceerigaabo oo dhan 21 Murashax.
Wasiirka Duulista hawada iyo gaadiidka cirka Md. Maxamuud Xaashi Cabdi, oo ka hadlay xafladaasi ayaa sheegay in dawlada KULMIYE ay wax qabad balaadhan ka sameysay adeegyada bulshada, taasina ay tahay wax ay ku faani karaan.
“Sida ururada kale ee siyaasadda ma odhanayo gubadkaan gubi doono ee anagu waxaan leenahay waxaas ayaan ummadda u qabanay oo ka samaynay horumarinta adeegyada Bulshada, Anagu KULMIYE ahaan waanu isku kalsoon nahay.,”ayuu yidhi Wasiirka Duulistu.
Md. Maxamuud Xaashi oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Waxaanu leenahay raga walaalahayo ah ee aanu tartamayno, waynu tartamaynaa ceebina ma jirto. Qaranimadana waynu ilaashanaynaa ee gamaankiina soo daaya.Anaguna waanu soo daynaynaaye’e.”
“Waxaan leeyahay ninka og inuu faraskiisu taag daran yahay yaanu iska sii qeylin,”ayuu yidhi Wasiirka Duulistu, waxaanu u mahad celiyay taageereyaasha xisbiga KULMIYE ee gobolka Sanaag.
Wasiirka Gaashaan-dhiga Md. Axmed Xaaji Cali Cadami, oo ka hadlay xafladaasi ayaa sheegay inay xukuumaddu waxqabad ku kasbanayso taageerada bulshada.
“Buug baa laga soo saaray waxqabadkii dawladan. Buugu wuu qoran yahay balan-qaadkii horena wuu barbar yaalaa dhammaadka sanadkan ayaa gobolada oo dhan loo dirayaa. Sanadkii horena waa loo diray. Markaa muwaadin kastaana xaq buu u leeyahay inuu talladiisa ku darsado haddii wax ka dhiman yihiin waxqabadka dawlada. Haddii waxqabadka dawladu barakaysan yahay ducada ku darro,”ayuu yidhi Wasiirka Gaashaan-dhigu.
Waxa isaguna halkaasi ka hadlay oo ka waramay barnaamijka xisbiga Guddoomiye ku xigeenka sadexaad ee xisbiga Kulmiye Md. C/Raxmaan Maxamed Talyanle.
Guddoomiye Ku xigeenku waxa uu dadweynaha reer Ceerigaabo u soo jeediyay inay codkooda ku soo saaraan xildhibaanada deegaanka ee ay u soo xuleen oo uu carabaabay inay ku doorteen khibrad iyo aqoon.
Xubnaha Musharaxiinta xisbiga kulmiye ee Degmada Ceerigaabo ayaa iyaguna munaasabadaas ku soo bandhigay sida ay ugu diyaargaroobeen inay tartan u galaan xubinimada xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi. waxayna halkaas ku soo bandhigeen qorshayaasha ay ugu talo galeen afarta sano.
Previous PostXisbiga UDUB Oo Shaaciyay Inay Qaadaceen Doorashada Goleyaasha Deegaanka Dalka Next PostXisbiga KULMIYE Oo Dhamaystiray 26-Ka Murashax Ee Ay U Xuleen Degmooyinka Bali-Gubadle Iyo Salaxley